8 nke a kacha kwuo okwu banyere aha akwụkwọ akụkọ ihe mere eme n'oge a | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
8 nke kachasị akụkọ banyere akụkọ akụkọ akụkọ ihe mere eme ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Akwụkwọ, Novela
Agbaghara m otu Otu ogidi ọkụ, na Ken follet, nke a ka bipụtara ugbu a ma nọrọla n'elu ndepụta ahụ. O yiri ka ọtụtụ nde ndị na-eso ụzọ Welsh ahụ nọ na-atụsi anya ya ike. Ma enwere aha ndị ọzọ dị na ọnọdụ mbụ nke ndị kachasị ekwu okwu ugbu a akwụkwọ akụkọ ihe mere eme. Edebewo m ha Akwụkwọ 8, site na akwukwo ohuru rue akwukwo ochie.
1 Ndị nwenụ Ugwu - Bernard Cornwell
2 Obí nke Ọnwa - Weina Dai Randel
3 Ọchị nke Wolf - Tim Leach
4 The Knight nke White Boar - José Javier Esparza
5 Spartan - Javier Negrete
6 Saga nke ogologo oge - Eva García Sáenz de Urturi
7 Onye isi mmiri na agha - Patrick O'Brian
8 Aga m azọpụta ndụ gị - Joaquín Leguina na Rubén Buren
Ndị nwenụ ugwu - Bernard Cornwell
Akwụkwọ nke atọ na saga nke Saxons, Vikings na Normans de Bernard Cornwell kwuru, onye Bekee a ma ama na-ede akwụkwọ, onye kere égbè ahụ Richard Sharpe kwuru na nna ukwu nke genre. Nịm na mwakpo viking nke Great Britain n’oge ọchịchị nke Alfred Onye Ukwu, Aha usoro isiokwu a na 2008.
Onye bu uzo bu Ragnarson kwuru, mgbe ụfọdụ a na-akpọ Uhtred Uhtredson. Amụrụ na Northumbria, ndị Danes jidere ya ma were ya. Ha na-akuziri ya ihe dịka nke ha. Na akwụkwọ akụkọ Uhtred laghachi azụ n’ebe ugwu mgbe o nyesịịrị Alfred aka mee ka Wessex bụrụ alaeze Saxon nweere onwe ya. Ọ chọrọ ịchọta onye ntụtụ ya, ma n'ụzọ, ị ga-abanye n'ala ndị nọ n'ọgba aghara na n'agha.
Kpamkpam saga a nwekwara a mmeghari ohuru dika usoro onyonyo site na aha izizi gị, Ala-eze ikpeazu.
ọnwa, S Obí - Weina Dai Randel
Ndi akpa akwụkwọ nke onye edemede China a. Anyị nọ na afọ 631 na protagonist, Mei, onye ya na ezinụlọ ya na-ebi nwayọ, mana n'ihi ọnọdụ, ga-abụ akụkụ nke nwanyi nke ndi-iko nke obí eze. Gaghị enwe ihe ọzọ ị ga-eme ma ọ bụghị ịnwale dọba uche eze ukwu. Na ọ ga-eme ya naanị otu ụzọ ọ mara: na àgwà ndị meworo ya onye a jụrụ ajụ n'etiti ndi-iko nwayi fọduru.
Ọnụ ọchị nke anụ ọhịa wolf - Tim Leach
Ka dị na ire ere n'ihi na anaghị ebipụta ya rue Ọktọba 26. Leach gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Warwick, ebe ọ bi ma na-akụzi ihe okike.
Akụkọ ọzọ na vikings ya na onye ozo, onye ukwe Landless Kirián. Ya na enyi ya Gunnar, onye agha Viking oge ochie biri na Iceland, gara gbue mọ nke kpagburu ugbo ala agbata obi. Ma ọ bụ aghụghọ ma ha gburu nwoke. Mpụ ahụ, na Narị afọ nke XNUMX Iceland , na-enweghị ndị eze ma ọ bụ ndị isi, a ga-eji ọla ọcha ma ọ bụ ọbara sachapụ ya. Ma ọ bụ ihu a onye iro ya na nkịta ọchị.
The Knight nke White Boar - José Javier Esparza
Onye nta akụkọ na onye edemede, onye edemede nke ihe karịrị akwụkwọ akụkọ 20, bipụtara akwụkwọ a na 2012. Na-agwa akụkọ nke Mpaghara, nke afọ ikpeazụ nke XNUMXth narị afọ nke oge anyị, ya na ezinụlọ ya na-agafe ugwu Cantabrian ị chọọ ala ka mma. Ma ha maara na ha nwere ike izute mkpọsa nke ndị Alakụba ma ọ bụ bụrụ ndị ohu na nnukwu ahịa nke Córdoba. Avata gị ga-adị ndị buuru Reconquest.
Onye spartan - Javier Negrete
Onye gụsịrị akwụkwọ na Classical Philology na-azụkarị ụdị nke echiche efu na akụkọ sayensị. Mana o dela akwukwo erotica ịga nke ọma.
Ọzọkwa na pre-ire ruo mgbe ọgwụgwụ nke ọnwa, na a akwụkwọ anyị na-aga n'afọ N’afọ 480 tutu amụọ Kraịst C. Eze Leonidas, tupu ị nwụọ n'agha nke Thermopylae, nye onye uwe ojii akwụkwọ ozi Perseus ma nye ya iwu ka ọ laghachi Sparta ma nye ya nwunye ya, Gorgo. Mana n'eziokwu, Perseus bụ nwa Eze Damarato, onye, ​​onye e mesoro izu nzuzo nke obí eze, tufuru ikike ocheeze ma mụta ịlanarị dịka onye agha dị mfe.
Saga nke ndi ochie - Eva García Sáenz de Urturi
En 2012 e bipụtara akwụkwọ akụkọ a nke bụ otu n'ime oké ahịa na nkatọ phenomena. Akụkọ ihe mere eme na mmekọrịta nke ogologo oge Jago del Castillo, na afọ 10.300, na Adriana, nwa okorobịa na prehistorian kpebisiri ike na-alaghachi obodo ya bụ Santander, nke ụlọ ọrụ ihe ngosi nka ebe ọ na-arụ ọrụ, ka na-ewu ewu.
Onyeisi ụgbọ mmiri na agha - Patrick O’Brian
Omuma ndi ochie. Mbụ aha na usoro nke akwukwo iri abuo na abuo nke onye isi akwukwo nke ndi agha mmiri nke ndi Britain dere. Starring onyeisi ndị agha Jack Aubrey na onye nwe ala na onye nledo Stephen Maturin, ha ka dị oké mkpa maka ndị na-anya isi na ha bụ ndị hụrụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme n'anya.
Na nke mbu akwukwo anyi no Mahon, nke Eprel 1800, na zuru agha napoleonic n'etiti Great Britain na France. N'ebe ahụ, n'oge egwu, Dr. Stephen Maturin zutere mgbe ahụ-Lieutenant Jack Aubrey. Of odide dị iche iche dị ka ha na-abụghị, ọbụbụenyi ha ga-abụ ga-adịru mgbe ebighị ebi.
Aga m azọpụta ndụ gị - Joaquín Leguina na Rubén Buren
Na July 5 akwukwo a meriri Alfonso X El Sabio Historical Akwụkwọ Ọhụrụ na nke iri na isii ya. Edere na tandem nke Leguina na Buren, ọ na-agwa ndụ nke Melchor Rodriguez, onye anarchist makwaara dika «Mmụọ ozi na-acha ọbara ọbara', Nke zọpụtara ọtụtụ ndụ n'oge Ekọn̄ mbio obio nakwa na ọ bụ nna ochie nke Buren.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » 8 nke kachasị akụkọ banyere akụkọ akụkọ akụkọ ihe mere eme ugbu a
Trailer nke _50 Shades Freed_. Ihe nkiri cinematographic mechiri.